Kadoma (Kadoma city) iguta riri muProvince yeMashonaland West, riri chinhambwe chinokwana 140km kubva muHarare munyika yeZimbabwe. Guta iri rainzi Gatooma kusvika mugore 1982.
Kadoma inowanikwa mumugwagwa mukuru weA5 pakati peHarare neBulawayo, pachinhambwe chinosvika makilomita 305 (190 maera) kumaodzanyemba nechekumadokero kweKadoma. Mitsetse yakatarwa yakati sambamba yeKadoma inoti: 18° 20' 24.00"S, 29° 54' 0.00"E (Mbariro yeTaranyika:18.3400; Mutambariko weTaranyika:29.9000). Kadoma Inowanikwa pamusoro pegungwa mamita anosvika p1,183 m (3,881 feet).
Gatooma yakavamwa muMwaka wechikumi 1890 semusasa wemugodhi; kukazogadzwa dare raitarira musha mugore 1907. Mugore 1917 Gatooma Municipality yakamisikidzwa. Guta iri rakapiwa zita raShe aigara pedyo ainzi Katuma.
Hotera Specks yakavhurwa mugore 1907, chikoro cheJameson high chikavambawo gore rimwechete apo Mai Amelia Fitt vakatanga kupa zvidzidzo kumba kwavo. mai Fiit vaive mudzimai waMayor wekutanga weguta reKadoma. Magetsi akatanga kusvitswa kuvanhu mugore 1922, kwakzotevera kuvhurwa kweGrand Hotel mugore 1925.
Hushangazhi[chinja | edit source]
Guta reKadoma rinozivikanwa nenhau yemigodhi inochera gold. Mugodhi wakaita mbiri ndiwo wainzi Cam and Motor Mine uri nhambwe inokwana 7km kubva mukadoma pamusha weEiffel Flats. Mugodhi uyu wakzovharwa uri pasi peRio Tinto Zimabwe. Cam and Motor ndiwo Harare wakabura gold rakanyanya kuwanda munguva yeZimbabwe .
Donje rinorimwa mudunhu reKadoma uye kune hushangazhi hune chekuita nekushanda nedonje. david Whitehead Textile yakavhurwa mugore 1952.
Kadoma iri pahukwidza 1,162 m uye ine hugari hwevanhu hunosvika 81,000 pakuwonekwa kwa2007. Guta iri riri parumbariro -18.3 nemutambariko +29.9 zvichireva kuti riri murumana rweTropics.
Kudoma (1. Call a list of names, 2. Speak relevantly, 3. Start eating before others). Zvichida zita rokuti Kadoma rakabva pamunhu aivambwa kudya vamwe vasati vavepo?
Tsvimborume hora inotanga kudoma mudyo: a bachelor of long standing begins eating before the others.
Angodomedza madesa ari oga: with relish, he drank the last drops all by himself.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kadoma&oldid=82113"
This page was last edited on 5 Zvita 2020, at 01:01.